मामा गोबिन्दासँगको विवादबारे बोले कृष्णा : यो झगडाले थाकिसकेको छु | Ratopati
कृष्णाले के भने ?
स्पटबोयको कुराकानीमा कृष्णाले भने, ‘मलाई राम्रोसँग थाहा छ कि मेरी माइजुले मविरुद्ध धेरैकुरा बोल्नुभएको छ । हो, म साँच्चै उदास थिएँ । तर मलाई लाग्छ कि उनी मसँग असाध्यै रिसाएकी छिन् किनभने मलाई असाध्यै माया गर्छिन् । ‘म उसको अनुहार पनि हेर्न चाहन्नँ’ यस्तो भन्नुले यो देखाउँछ कि उनलाई पीडा भएको छ । र तपाईं त्यहि व्यक्तिसँग रिसाउनुहुन्छ जसलाई तपाईं माया गर्नुहुन्छ ।’
कृष्णाले थपे, ‘मलाई थाहा छ कि उनले मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ । नभए यत्ति रिस किन ? यो शब्द आमा–बुवाले बच्चासँग रिसाएका बेला मात्रै बोल्न सक्छन् । म मामा र माइजुलाई असाध्यै माया गर्छु । उहाँहरुले मलाई माफी दिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो अत्यधिक चाहना छ । मैले यसका लागि अत्यधिक कोसिस पनि गरिसकेको छु । तर उनीहरुले मेरो माफी स्वीकार गरिरहनुभएको छैन र त्यसैमा समस्या छ । जब म उनीहरुको बच्चा जस्तै हुँ भने मलाई माफी दिन किन तयार छैनन् । यत्तिका अन्तरवार्तामा मैले थुप्रै पटक भनिसकेको छु कि हामी हाम्रो समस्या सुल्झाउनेछौं । तर हामीबीच अहिले पनि स्थिति सामान्य छैन ।’